Magacyada Cayaartoyda laga Saaray Liiska Champions League ee kooxaha ay u dheelaan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Magacyada Cayaartoyda laga Saaray Liiska Champions League ee kooxaha ay u dheelaan?
(05-09-2017) Inta badan kooxaha kubada Cagta qaarada yurub ee Xiligaan ka qayb gelaya koobka Xiisaha badan ee Champions League waxa ay Xiriirka UEFA u gudbiyeen Magacyada Cayaartoyga uga qayb galeysa koobkaas waxaana jira in Xiddigo magac leh laga waayey liiska kooxdoodu gudbisey.
Cayaartoyda oo Sababao kala duwan looga reebay Liiska kooxdooda ee koobka Champions League ayaa waxaa ka mid ah Cayaaryahanka Chelsea ee Diego Costa kaas oo aan ku soo laaban Kooxdiisa tan iyo markii uu dhamaaday Xili Cayaareedkii la soo dhaafay.
Naadiga dalka Jarmalka ee Dortmund ayaa liiska ay soo gudbisey waxaa ka maqnaa Cayaaryaahnka Marco Reus’ kaas oo ay sheegeen in dhaawac dartiis looga reebay Liiska ay Gudbiyeen.
Macalinka kooxda PSG Unai Emeri oo Xiligaan lasoo Wareegay Cayaartoyda Neymar iyo Kylian Mbappe,ayaa liiska uu gudbiyey ka reebay Xiddiga dalka france ee Hatem Ben Arfa kaas oo sidoo kale aan qayb ka ahayn qorshiisa Xiligaan.
Imaanshihii Juventus ee Mattia De Sciglio iyo Benedikt Howedes waxa ay keentay in Liiska naadiga ee Champions League laga tiro Stephan Lichtsteiner kaas oo looga reebay Sabab aan lamicneyn.
Ugu danbayn Nathaniel Clyne, Lazar Markovic, Danny Ings, Vincent Janssen iyo Erik Lamela ayaa kooxaha Premier League ka reebeen liiska ay soo gudbiyeen kuwaas oo aan u dheeli doonin kulamada koobka Horyaalada ilaa bisha janaayo 2018.